Kedu ihe nchịkọta weebụ? Ndị ọkachamara na mpempe akwụkwọ akọwa
Nchịkọta weebụ bụ usoro nke wepụ data na nnukwu site na weebụsaịtị ndị ọzọ. Ọ dị ka nchọpụta weebụ na data achọtara na-echekwa ya na nchekwa kọmputa na mpaghara kọmputa. Taa ndị mmadụ nwere ike ịchekwaa data niile a gbakọtara na kọmputa ha naanị otu pịa nke bọtịnụ. Ọtụtụ oru, yana ndị mmadụ n'otu n'otu, jiri ụdị usoro a maka ihe dị iche iche, dị ka ndepụta nke aha ma ọ bụ ngwaahịa. Ma, ha kwesiri ịkpachara anya ka ha ghara iweghachi ma ọ bụ regharịa otu akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ n'ihi na ọ bụghị ihe arụ ọrụ - stoffe leder online kaufen.
Ihe Nlereanya Web
Taa, ọtụtụ ndị isi na-agbalị ịchọta ọnụ ọgụgụ nke ihe bara uru na intaneti. Site n'iji ntanetị weebụ, dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa nwere ike ịchọta ụfọdụ ihe bara uru na-eduga n'ịrụ ọrụ ya. Ọ bụ usoro dị irè. Kama ịnwa ichota data niile, dị ka aha aha na ozi kọntaktị, ndị isi na ndị ndú otu nwere ike iji robot nchịkọta weebụ iji kpokọta data niile ha chọrọ n'ime kọmputa ha. Ha nwedịrị ike ịnakọta ụfọdụ URL, nke nwere ike inyere ha aka ịchọta ozi a kapịrị ọnụ..
Ụlọ ọrụ ego na Web Scraping
Fintech Industries na-eji ọtụtụ ntanetị weebụ, ịchọta ozi niile dị mkpa ha chọrọ. Site n'iji ntanetị weebụ, ụlọ ọrụ ego na-anwa inweta uru ndị ọzọ na-enweghị ihe ize ndụ na naanị otu ụzọ isi mee ya bụ ịmara karịa ndị ọzọ na-agbalị ime otu ihe ahụ. N'iburu ihe data nke ulo oru ego na-achikota, ihe kariri uru ga adi. Otu n'ime ụzọ kachasị mma maka ndị ọchụnta ego nke na-achọ inweta uru bụ ịdenye aha na ọrụ Bloomberg, ịnweta ohere niile dị mkpa ma dị mma karịa ndị na-asọmpi ha. Nke a bụ isi ihe mere ọtụtụ nnukwu ụlọ ahịa ji adabere na ntanetị weebụ; ha na-achọ data kachasị mma, iji mee ka ihe nhiehie dị ole na ole ma nwee ike ịbawanye uru ha bara.
Web Scraping Na-eme ka ndị mmadụ mee nchọpụta n'ozuzu
Nchịkọta weebụ nwere ike inyere ọtụtụ ndị ọzọ aka, dị ka ndị na-eme nnyocha ma ọ bụ ụlọ ọrụ, dịka mahadum na gọọmentị iji mee nchọnchọ ha ma chịkọta data niile dị mkpa ha mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịchọta ezigbo ihe ọmụma iji mee ka okwu 'ike' maka nyocha ha.
Olee otú ndị mmadụ pụrụ isi malite Web Scraping?
Ịchịkọ data dị iche iche na weebụsaịtị nwere ike ịbụ ọrụ siri ike. Ndị mmadụ na-amalite na weebụ dị mkpa ka ha jiri ngwa weebụ scraping dị irè, dika Dexi.io. Ngwaọrụ a na-eme nchọgharị na-enye ndị ọrụ ya nhọrọ iji chịkọta data niile ha chọrọ n'oge dị adị, ọ na-enyekwa ha ohere ịchekwa ozi ha gbakọtara kpọmkwem na Box.net na Google mbanye.
Nchịkọta weebụ dị irè dị irè ma dị mfe. Ọ na-enye ndị mmadụ ohere iji wepu data niile ha chọrọ n'oge ọ bụla.